“Akkuma gammachuu keenyaa ba`aan nurra jiru dachaadha”- Pirezdaanti Lammaa Magarsaa
“Akkuma gammachuu keenyaa ba`aan nurra jiru dachaadha”- Pirezdaanti Lammaa Magarsaa Featured
Finfinnee: Haalli muudamni ministira muummee haaraa itti raawwatame seenaa biyya kanaa keessaatti isaa haarawaafi addaa waan ta`eef heddu gammaduusaaniifi kanaa boodas ba'aan dachaa akka isaan eeggatu Pirezdaantiin Oromiyaa ibsan.
Pirezdaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ibsa Kibxata darbe Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaaf kennaniin, saboota sablammootaafi ummatoota biyyattii hundaan baga gammaddan baga gammanne erga jedhanii booda, aangoo qaroominaan walharkaa fuudhuun mallattoo jijjiiramaafi guddinaa ta'uu dubbataniiru.
Ministira Muummee Itoophiyaa ta`aniin kan muudaman Doktar Abiyyi Ahmadiif yeroon itti aanu kan milkaa`inaa akka ta`uuf hawwii qaban ibsanii, muudamni ministira muummichaa haaraa haala kanaan duraatiin bifa adda ta`een raawwatamusaafi seenaa biyyaa keenyaafi Afrikaa keessatti isa addaa ta'uu himaniiru.
Raawwii boqonnaa seenaa haaraa hordoofsiisee arguun keenya seenaa dukkannaa`aa tokkoorraa gara seenaa ifatti ce`uu keenya mirkaaneessa kan jedhan Obbo Lammaan, kanaaf adeemsi muudamni ministira muummicha haaraa ta`u qofa otoo hintaane kan seenaan haaraan itti galmaa`e akkasumas, abdiin biyya keenyaa itti laliise ta'uusaa ibsaniiru.
Aangoo karaa qaroomina qabuun walharkaa fuudhuun madda qaroomina mallattoo jijjiiramaafi guddinaa waan ta`eef sadarkaa kanarra ga'uuniifi dhaloonni ammaa kana arguun isaa carraa miidhagaafi milkaa`ina olaanaa akka ta`es dubbataniiru.
Ummanni Oromoo carraa seenaa keessaatti hawwuu malee argate hinbeekne kana milkeessuuf xiiqii kutannoofi itti gaafatamummaa olaanaan cime hojjachuun akka irraa eegamu kaasanii, gammachuun argame dachaa akkuma ta'e ba'aaniifi ittiigaafatamummaan eegamus dachaa ta'uu addeessaniiru.
Hawwuufi gammaduun qofti gahaa waan hintaaneef, injifannoo argame kana kunuunsuun haalaan hojjetanii argamuun barbaachiisaa ta'uus eeraniiru. Kanaafuu, yeroo kamiyyuu caalaa nagaafi tasgabbii naannoofi biyyaa mirkaneessuun saboota, sablammootaafi ummattoota biyya kanaa wajjiin jaalala, kabajaafi waldanda`uun hirmaannaa roga hundaan taasifamu daran cimsuun hojii fakkeenyummaa olaanaa qabu raawwachuun gahee akka biyyaatti nutti kenname milkeessuu qabna jechuun dhaamaniiru.
Torban kana/This_Week 11803
Torban darbe/This_Month 91640
Guyyaa mara/All_Days 1603598